Kingdom Builder Empire Edition: Humambo Hunowedzera Hurukuro yeAnniversary - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo.
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | Apr 29, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Kingdom Builder mumwe weQueen Games 'yakabudirira kwazvo mitambo. Makore gumi nerimwe mushure mekutangwa uye makore gumi mushure mekuhwina Mutambo weGore, Queen Games vava kupemberera mutambo uyu nechinyorwa chakakosha. Mukuwirirana nekubudirira kukuru kwemutambo, mutambo wacho pachawo wava kukurawo.
Troisdorfer Spieleverlag irikupemberera zuva rekuzvarwa kwayo kwemakumi matatu gore rino. Uye zvakare, 30 zvakare igore regumi iro mushure Alhambra mutambo wechipiri wegore mubairo, unopihwa Queen Games Kingdom Builder akanga agamuchira. Zuva rekucherekedza mubairo uyu rave chiitiko cheshanduro yakakosha yemutambo.
Avo vanoda humambo hukuru vachawana zvinhu zvikuru pano
Mitemo yemutambo, iyo inonyanya kukodzera mhuri uye dzimwe nguva vatambi, inokurumidza kutsanangurwa. Wese munhu ane kadhi remaoko rinoratidza imwe yemhando pfumbamwe dzinobvira dzenzvimbo. Kana yave chijana chako, unodhirowa rimwe kadhi. Ipapo rimwe remakadhi maviri rinofanira kuridzwa uye nzvimbo nhatu dzinofanirwa kuiswa pane inoenderana mhando yenzvimbo. Kana zvichiita, idzi dzinofanira kuiswa padivi penzvimbo dzako dzekugara dzakatoiswa. Kuvaisa pedyo nenzvimbo kunogona kuvapa hunyanzvi hwakakosha hunogona kushandiswa kubva ipapo zvichienda mberi. Kune goridhe (=victory points) yenzvimbo dzekugara dziri padyo nenhare. Nekudaro, goridhe rakawanda rinopihwa nekuda kwemamiriro anoratidzwa pamakadhi matatu eKingdom Builder.
Iyo yakaziviswa yeKickstarter Empire edition ikozvino inouya nezvimwe zvinhu zvakakura. Imwe neimwe yemutambi mavara ine dhizaini yayo yezvivakwa zvepurasitiki zvino. Nhare dzinofambawo mu Empire edition mumativi matatu. Iyo nzvimbo mataira akagadzirwawo epurasitiki pano. Kuti utsigire zvivako zvirefu, mapaneru anenge anenge kota yakakura. Mukuwedzera, kune yakagadziridzwa zvachose mifananidzo yebhokisi uye makadhi. Sebhonasi yakawedzerwa, kune promo pack yeTwist makadhi anogona kuwedzera mitemo mitsva kumutambo. Izvi zvakatanga kuiswa mukati winterkingdom akasuma.
Kingdom Builder Empire Edition mutambo wevanhu 2-5 vane makore 8+ uye unotora maminetsi makumi mana nemashanu kusvika makumi matanhatu kutamba. Mushandirapamwe weKickstarter wakarongwa kutanga musvondo rekutanga raChivabvu. Avo vanofarira vanogona kupinda mushandirapamwe pano bookmark
Kare Qwixx: Mutambo wedhayisi rimwe, misiyano yakawanda
Inotevera Mitambo yemhuri mitsva inowanikwa kubva kuPegasus Mitambo
Zhizha yekuvandudza yeMhuka Kuyambuka: New Horizons inounza mvura inonakidza
Saga rinoenderera mberi: SWTOR - Legacy Of The Sith kubva musi wa14 Zvita
Samurai Shodown yeXbox Series X / S iri kuuya chirimo chino
Mitambo mitatu yeDisney board isati yave kuwanikwa muGerman